Wiil uu dhalay Faysal Cali Waraabe oo lagu dilay duqeyn Mareykanku uu ka geystay dalka Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWiil uu dhalay Faysal Cali Waraabe oo lagu dilay duqeyn Mareykanku uu ka geystay dalka Suuriya
January 14, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Xuseen Faysal Cali Waraabe oo ah wiilka la dilay. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wiil uu dhalay Faysal Cali Waraabe, oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani ee Somaliland, ayaa lagu dilay duqeyn Mareykanku uu ka geystay gudaha dalka Suuriya dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay ee 2017, sida uu sheegayay aabihiis.
Wiilka oo magaciisa ay warbaahinta ISIS ku sheegtay Abu Shuceyb AS-Somali, balse magaciisa dhabta ah uu ahaa Xuseen, ayaa ka tagay dalka Finland sanadkii 2013 si uu ugu biiro maleeshiyada ISIS.
Faysal Cali Waraabe oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay dhimashada wiilkiisa.
March 12, 2020 Maxkamada ciidamada Dowladda Soomaaliya oo xukun dil ah ku riday xubin katirsan maleeshiyada ISIS